မျိုးသာကီအတွက် ရဲဝံ့ ဒို့ အာဇာနည်: ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌကြီး ဒီမိုကရေစီ နည်းလမ်းကျအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မည်လား? “၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ လူအခွင့်အရေး၏ တိုက်ပွဲနှစ်” မြန်မာ့သွေးအနီရောင် မညစ်စေနဲ့ ။ စစ်ကျွန်ဘ၀လွှတ်မြောက်ကြဖို့တော်လှန်ှရေးသို့့ အသင့်ပြင်
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌကြီး ဒီမိုကရေစီ နည်းလမ်းကျအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မည်လား?
ဒီတခါတော့ ဖတ်လို့ရမယ်ထင်ပါတယ်။ ဇော်ဂျီဖောင့်နဲ့ပါပဲ။
ယုံကြည်စွာဖြင့်Rest of your post